Admin, Author at Enepal Serofero
बजारमा विभिन्न खालका कण्डम पाइन्छन् । युवा युवतीले ती कण्डमलाई खपत पनि गरिरहेका छन् । तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । बजारमा अब ‘शाकाहारी’ कण्डम पनि पाइनेछ । सस्टेन नेचुरल ब्रान्ड नामबाट ‘शाकाहारी कण्डम आएको हो । कुनै पनि जनावरको उत्पादन प्रयोग गर्न अस्विकार गर्ने शाकाहारीका लागि उक्त कम्पनीले सस्टेन कण्डमको क्यासिन ल्याएको दाबी गरेको छ । क्यासिन एउटा यस्तो मिल्क प्रोटिन हो जसको प्रयोग साधारणतया अन्य ल्याटेक्स कण्डममा हुने गर्दछ । यसका साथै यो कण्डम पर्यावरण अनुकूल पनि छ । यो कण्डमको प्रयोगपछि यसलाई फ्क्दा यसले माटोलाई विषालु बनाउँदैन । सस्टेन न्याचुरलका सह–संस्थापक मिका होलन्डर भन्छन्, ‘सस्टेन कण्डममा प्रयोग हुने ल्याटेक्स दक्षिण भारतमा बनाइने रबरबाट बनाइएको हो ।’ उनका अनुसार साधारणतया मानिसहरू आफ्नो खाना र मेकअपमा प्रयोग हुने सामग्रीको विषयमा सचेत हुने गर्दछन् । तर, कण्डमजस्तो उत्पादनको
बिहान दिनको प्रतिक हो । नयाँ दिनको सुरुवात हो । त्यसैले बिहानको समयलाई मानीसहरु प्रेम गर्छन् । दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्छन् । दिन शुभ हुनका लागि तन्दुरुस्त शरीर चाहिन्छ । शारिरीक व्यायमले शरिर फुर्तिलो बनाउँछ । त्यसैले बिहानको समयमा अधिकाँस मानीस शारिरीक व्यायममा केन्द्रित हुन्छन् । व्यायमसँगै पुजापाठमा सक्रिय रहन्छन् । मनलाई शान्त पार्ने, देवतालाई खुशि पार्नमा प्रयत्नशील रहन्छन् । यी दुई कामसँगै अरु के के गर्यो भने हुन्छ फलीफाप ? १.तामाको लोटामा राखेको पानी खानुहोस् बिहान उठ्ने बित्तिकै तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनु राम्रो मानिन्छ । यसको लागि राति सुत्ने बेलामा तामाको भाँडोमा पानी राख्ने र बिहान उठ्ने बित्तिकै पिउनाले पेट सम्बन्धी अधिकांश रोग कब्जियत, अपच, ग्याष्टिक आदि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यो काम गर्नु भन्दा पहिले चिकित्सकको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ । २.ते
बिहानै नागदेवताको दर्शन गर्नुहोस र जान्नुहोस सपनामा सर्प देखियो भने के हुन्छ ? सर्प सपनामा देखिनु को शंकेतहरु हे हुन भनि जान्न कठीन छ। अरु जनावरहरु झै सपनामा सर्प देखिनुको धेरै हुन सक्छ। सर्प यौन को संकेत हो। सर्पको सपनाले यौनशक्तिलाइ संकेत गर्दछ। यदि सर्प सपनामा आफुसँग बेरिन्छ वा कुनै शक्ति संचार गर्ने गरि काम गर्दछ भने त्यो सपनाले तपाइको यौन शक्ति बढेको संकेत गर्ने हुन्छ। केहि सभ्यतामा सर्पलाइ ज्ञान र शक्तिको प्रतिक मानिन्छ। सर्प सपनामा देखिनुको अर्थ हुन्छ, व्यक्तित्वमा आउने परिवर्तन। यस्ता सपनाले तपाइलाइ अत्याउने गर्दछ, तर साथसाथ जुन कुराबाट एकदमै दुखित हुनुहुन्छ तीबिर्साउने अवसर पनि प्रदान गर्छ साथै तपाइलाइ सावधान बनाउछ, र एकदमै नलौ जीवनको बाटोबाट अगाडी बढाउन सहयोग गर्दछ। सर्पले सावधान गराउछ, यदि तपाइलाइ कसैले छल गर्न लागेको छ भने। कुनै लुकेका कुरा वा गोप्यकुराहरु प्रति तपाइलाई स
पाथीभरा देवी विश्‍वास आस्था एवं पवित्रताकी देवी हुन । त्यसैले पाथीभरा धाममा त्यसरी नै जानुपर्ने हुन्छ। धाममा जानलाई कुनै जात, धर्म वा लिङ्गको भेदभाव छैन र बन्देज छैन । “मनमा शुद्धता, देवीप्रतिको भक्तिभाव राखे पुग्ने तर पाथीभरा धाममा गर्भवति, रजस्वला (नछुने वा पर सरेकी) भएकी महिला, बरखी बारेको, मनमा लोभ, पाप बोकेको मान्छे गएको खण्डमा उनीहरूको सर्वनाश हुन्छ, ठूलो क्षति हुन्छ” भन्ने जनधारणा रहिआएको छ । पाथीभरा देवीको निम्ति पशु बलि अनिवार्य नभए पनि बलि चढाउनु अति उत्तम मानिन्छ । काटमार नगर्नेहरू देवीलाई स्वादिष्‍ट फलफूल तथा मिठाईको भोग चढाउँछन । पाथीभरा देवीलाई अटल शौभाग्यकी प्रतिकको रूपमा मानिन्छ। त्यसैले सबै किसिमका श्रद्धालु भक्तजनहरूले देवीलाई सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्री जस्तै सिन्दुर, टीका, गाजल, काँगियो, आदि पनि (एक किसिमको अनिवार्य रूपमा) चढाउने गर्दछन । भिडियो:
श्रीमान र श्रीमतीबीच ठाकठुक पर्नु र नोकझोक हुनु दाम्पत्य सम्वन्धकै एउटा हिस्सा हो । तर, यस्तो प्रकारको झगडा प्राय अल्पकालिन नै हुन्छन् । ‘लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो’ भन्ने त भनाई नै छ ।हालै गरिएको एक सर्भेक्षणले विवाहित जोडीहरुबीच झगडाले सम्वन्धलाई अझै कसिलो र मायालु बनाउने देखाएको छ । उक्त सर्भेक्षणमा सहभागी ४४ प्रतिशत विवाहित जोडिहरुले सातामा एक-पटकभन्दा बढी झगडा गर्ने गरेका थिए । यस्तो झगडाले सम्वन्धले कुनै दिर्घकालिन असर परेको देखिएन ।कहिलेकाँही झगडा गर्ने जोडीहरु स-साना भ्रमका बाबजुद पनि लामो समयसम्म सँगै बस्छन् । किनभने उनीहरुलाई आफ्नो माया चोखो र पवित्र छ भन्ने थाहा हुन्छ ।आफ्नो सम्बन्धलाई दिगो र रमाइलो बनाउने हो भने मनमा तुष पालेर बस्नु हुँदैन । मनको कुरा आफ्नो जोडीसँग पोखिहाल्नुपर्छ । यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग खुल्ला दिमागले राम्रोसँग बोल्न सक्नुभयो भने सम्बन्धमा प्र
इस्लामावाद । नेपालमा जस्तैं पाकिस्तानमा पनि विभिन्न संघसंस्थाको नाममा हजारौं एनजिओ आइएनजिओहरु काम गरिरहेका छन । प्रधानमन्त्रीको रुपमा इमरान खान सत्तामा आएपछि पाकिस्तान सरकारले देशभित्र काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हरुलाई ६० दिनभित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ । पाकिस्तानले एनजीओहरुलाई आफ्नो काम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । पाकिस्तानी सरकारको निर्णयबाट प्रभावित एक्सन एडले सरकारको यो निर्णय नागरिक समाज माथि भएको हमलाको अर्को शृङ्खला भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । पाकिस्तानको गृहमन्त्रालयले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सरकारका तर्फबाट एक्सन एडलाई पठाइएको पत्रमा छ महिनापछि रजिष्ट्रेसनका लागि पुनः आवेदन गर्न सक्ने उल्लेख छ । पाकिस्तानमा मानवअधिकारको उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने घटना बढेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई देश छोड्न आदेश दिएको हो । पाकिस्तानको ग
युके । अर्घाखाँचीमा जन्मिएर काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाउने कोशिस गरिरहेकी कला र गलाको माध्यमले नेपालभर चिनाउन लागिपरेकी जलजला परियार आफ्नो गायकी यात्रा नेपाली तारा सिजन ३ बाट सुरु गरेकी नेपाली तारा सिजन ३ कि प्रतिस्पर्धी हुन्। मिठो स्वरकी धनी विभिन्न एल्बम र फिल्ममा समेत गाईसकेकी र आफ्नो गायकीको जादुले सबै नेपाली गीत संगीत प्रेमीको मन जितिसकेकी तिनै जलजला परियार पछिल्ल्लो समयमा दुवै किड्नी फेल भई काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमा मृत्युसंग लड्दै थिइन्। २१ वर्षकी जलजला आज मृत्युलार्इ जितेर फेरी आफ्नो सागीतिक यात्राको क्रममा अगाडी बढ्दै छन्। उनी भन्छिन, ‘मलाई धेरै बोल्न आउदैन र फेसबुक लाइभमा पहिलो पटक आउदै अहिले उनको स्वास्थ अवस्था र उनको सांगीतिक यात्राको जानकारी आफैले दिएकी छन्। भिडियो
काठमाडाैँ । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मोन्ट्रियल महासन्धि आजदेखि नेपालमा पनि लागू भएको छ । संघीय संसदले गत भदौ पहिलो साता सर्वसम्मतिले पारित गरेको ‘मोन्ट्रियल कन्भेन्सन’ आजदेखि लागु भएको हो । सन् १९९९ मा पारित भएको महासन्धि नेपालमा कार्यान्वयनमा आएसँगै विदेश यात्राका क्रममा विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम बढेको छ । विगतमा वार्सा महासन्धिअनुसार नेपाली यात्रुका परिवारले २० हजार अमेरिकी डलर मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेका थिए । अब क्षतिपूर्ति रकम १ लाख १३ हजार १ सय एसडीआर अर्थात् १ लाख ५७ हजार २०९ अमेरिकी डलर भएको छ । नेपाली यात्रुलाई क्षतिपूर्ति रकममा चित्त नबुझे नेपालकै अदालममा मुद्दा दायर गर्न पाइनेछ । त्यसैगरी कार्गो सामान तोकिएको समयमा आपूर्ति नभए वा हराए वा खराब भए प्रतिकिलो १९ एसडीआर अर्थात् ३ हजार १५ रुपैयाँ, ब्यागेज तो
१२ घण्टामै ‘क्याप्टेन’ को गीत युट्युव ट्रेण्डिङमा (भिडियो सहित)
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा अनमोल एकमात्र यस्ता युवा नायक हुन जसको फिल्म गीत मात्र होईन अन्तरवार्तासमेत युट्युवमा ट्रेण्डिङमा पर्छ । उनको जब कुनै नयाँ फिल्म आउँने तरखरमा हुन्छ भने उनको खोजी पनि दर्शक तथा मिडियाले निकै गर्छन् । सुटिङ सकिएको लामो समयपछि उनको फिल्म क्याप्टेनको गीत हिजो रिलिज भयो । “रहर छ संगै” बोल रहेको गीतमाअन्जु पन्त र सुगम पोखरेलको स्वर, दिग्गज धौरालीको शब्द, अर्जुन पोखरेलको संगीत, सैलेन्द्र एम प्रधानको संगीत संयोजन रहेको छ । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको उक्त गीत रिलिजको २४ घण्टा पनि नबित्दै १२ घण्टामा युट्युव ट्रेण्डिङमा परेको छ भने ५ लाख ९३ हजार भन्दा बढिले हेरिसकेका छन् । जुन भ्यु यति कम समयमा निकै उत्कृष्ट हो । यसलाई पनि अनमोलको क्रेज या भनौ अनमोलप्रतिको चासो कतिको छ भन्ने देखाउँछ । गीतमा अनमोल र उपासना सिंह ठकुरीबीच रोमाण्टिक जोडी देखिएको छ । फिल्म फ
नुवाकोट नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नंवर १ घ्याङफेदीको घ्यावारमा भएको सवारी दुर्घटनामा ठुलाे संख्यामा मानविय क्षती भएकाे छ। दुप्चेश्वर गाउँपालिका प्रमुख योविन्द्रसिंह तामाङका अनुसार मिनी ट्रक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको स‌ंख्या १८ पुगेको छ । मृत्यु हुनेमा १५ पुरुष र ३ महिला छन् । मृतक घ्याङफेदीका रिबल तामाङ, आइते तामाङ र शिवरबेंसीका रितेश पण्डित को शनाखत भएको छ भने अन्यको सनाखत भइसकेको छैन । शुक्रबार साँझ सोही वडाको सिम्टाङबाट सिसिपु जाँदै गरेको बा ३ ख ३९१३ नम्बरको मिनी ट्रक दुर्घटनामा परेको हो। प्रहरीका अनुसार सिम्टाङमा घेवा (काजक्रिया) मा आएका स्थानीयवासी घर फर्किने क्रममा दुर्घटना परेको हो। घाइते ७ जना घाइतेलाई उपचारको लागि काठमाडौ पठाइएको छ भने ९ जनाको उद्धार हुँदैछ। दुप्चेश्वर गाउँपालिका १ घ्याङडाँडामा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार साँझ भएको द
मगर्नी भाउजूको कथा (11,595)